Waa maxay waxa xun ee ku dhacay Messi-ga Jarmalka ee Mario Götze & Hadalkii layaabka lahaa ee macallin Joachim Löw! – Gool FM
(Yurub) 30 Luulyo 2019. Mario Götze waxa uu ku soo caan baxay da’yaraan, waxa uu ammaan ka helay qaar ka mid ah halyeeyada kubadda cagta sida Ronaldinho, waxa uu matalay kooxaha ugu tunka wayn dalkiisa hooyo ee Jarmalka, balse kuma filanaanin intaas oo dhan si uu noqodo xiddig maqaam sare ah.
Götze waxa uu ahaa dhaliyihii ansixyay goolkii madiga ahaa ee Jamalku ku qadeen koobkii adduunka 2014-kii lagu qabtay dal weynaha Brazil, waxaana uu ka ooysiiyay malaayin muwaadiniin ah oo ka soo jeeda Waddanka Argentina oo u ka mid ahaa ninka shanta jeer ku guuleystay abaal-marinta xiddiga adduunka ee Lionel Messi, balse maxaa u dhacay wiilkii mucjisada ahaa ee Jarmalka.
Warbixintaan oo aan ku eegi doono waxa xun ee ku dhacay Messi-ga Jarmalka ee Mario Götze waxa inoo diyaariyay, soona jeedinaya wariyaheenna Shaafici Maxamuud Nuur Shaafino ee halkaan hoose ka daawo muuqaalka.
Muxuu sameeyey Gareth Bale markii uu burburay heshiiskii uu ku aadi lahaa dalka Shiinaha?